Murume wangu anondisvira akaviga mboro, 13 years ndichisvirwa handisati ndamboiwona! - Masasi eHarare
Ask Tete Molly Murume wangu anondisvira akaviga mboro, 13 years ndichisvirwa handisati ndamboiwona!
Tete Molly inini ndiri mukadzi ane 38 years, murume wangu ndi Doctor and tinogara
muHarare, ndava ne13 years ndichigara nemurume wangu achindisvira but handisati ndambowona mboro yake uye handiyizive kuti yakaita seyi, kana tavakusvirana
anotanga kudzima light asati abvisa hembe dzake.
Mboro yake ndinotoibata ndichinyatsonzwa kuti imboro chaiyo uye paanondisvira
ndinonyatsonzwa kuti beche rangu rapinda mboro but handisati ndambowona zvayakaita
uye haadi kuti ndiiwone, anopinda nehembe dzake kana nepant rake zvekuchinja
mubathroom uye pakunogeza handisati ndambogeza naye, haadi kugeza neni uye haatombodi kuti ndipinde mubath room maanenge achigezera he makes sure kuti akiya door remubathroom kana achigeza ozongobuda atochinja hembe dzake zvese nechipfeko chemukati.
Murume wangu munhu anemari anezvese uye hapana chandinoshaiwa, kana achindisvira
haaburitse hurume, but ane zvaanosvinira mubeche rangu zvinenge zvichibuda mukagubhu ke plastic kadiki diki, ndakambomubvunza kuti chaiva chiyi chaayisvinira mubeche rangu akandiudza kuti yaiva lubrication yebeche inoita kuti mboro itsvedzerere uye kusvirana kunyatsonaka, ndakamuti andiratidze but akaramba, rimwe zuva akakanganwa kuviga kagubhu aka ndichibva ndakawona ndakaziva kuti kaive kakafanana nekaigara mumba memukomana wedu webasa ndokubva ndakaisa mark ndichibva ndakadzosera pandaive ndakawana.
Ndakazoti rimwe zuva mukomana webasa asipo bvandapinda mumba make waneyi kabhodhoro kaya ndiko chaiko nemark yandainge ndakaisa musi wandakambokawona saka ndakafungidzira kuti paifanira kunge pane zvaiyitika zvandaisaziva pakati pemurume wangu nemukomana uyu ndichibva ndaisisa hidden room survaillance camera muroom memukomana uyu, murume wangu nemukomana uyu vaiwirirana zviri kuma extremes uye mari yaipiwa mukomana uyu yaiva yakawandisa zvisingaenderane nebasa rake.
Ndakazotarisa pamakamera aya waneyi mukomana ari busy kudhonza mboro yake masperms ake achibva amayisa mukabhodhoro kaye, time time murume wangu achibva
apinda mumba umu ndokupa mukomana uyu mari achibva apihwa kabhodhoro kaya kane
masperms emukomana uyu. Ndine vana vaviri vese vana ava vakafanana nemukomana wedu webasa, ndirikurwadziwa zvikuru nezvandakawona kuti murume wangu ndozvaari kundiyita nanhasi iye haazvizive kuti ndinozviziva zvaarikundiyita ndoita seyi, ikozvino ndineimwe nhumbu yechitatu ndichingoitwa izvozvi ndibatsireiwo nekuti zviripachena vana vandinavo ndeva gardener wangu zvese nenhumbu yandinayo yacho ndibatsireiwo.
Nyaya yako yakawona wakambotaura here nemurume wako kuti sei asingade kuti uwone mboro yake kana kuti chii chakaitika mukukura kwake. Chokwadi murume wako sa Doctor akawona kuti haakwanise kuzvarisa ndokubva atsvaga plan yekuti apote achikuisa masperms agardner kuti vanhu vafunge kuti haana problem. Murume wako haadi kuti uzive kuti iye haana hurume asi iwewe kana usina problem nanzo you can continue naye but chokwadi hachirove chichabuda chete kuti vana ava vese havasi vake even nemari yaanobhadhara ichasvika pakushaya basa.
Iwewe chaungaita kutsvaga munhu wechikuru wekuti utaure naye kuti azivise murume wako kuti zvese zvaanokuita nemasperms emukomana webasa wakazviwona and hauna basa nazvo as long as muchidanana. Kazhinji kana murume achiziva kuti iwewe hauzive hazvina basa asi akaziva zvinogona kukanganisa relationship yenyu saka be careful paunenge wakutaura naye izvi.
murume wangu anoviga mboro